Kusolwa izidakamizwa ngokubulawa kwabantu - Ilanga News
Home Izindaba Kusolwa izidakamizwa ngokubulawa kwabantu
Kusolwa izidakamizwa ngokubulawa kwabantu
UNgqongqoshe uCele uthi babalelwa ku-531 asebebulewe
UZWAKALISE ukukhathazeka ngokwanda kwezigameko zokudutshulwa kwenqwaba yabantu ngesikhathi esisodwa KwaZulu-Natal, uNgqongqoshe wamaPhoyisa, uMnu Bheki Cele. Ubenesigcawu nabezindaba izolo ngoLwesithathu eThekwini, ezocacisa ngokuqhubekayo mayelana nezigameko zokubulawa kwabantu abawu-14, ezigamekweni ezahlukene ezenzeke kule nyanga kulesi sifundazwe. Phakathi kwalezi zigameko, kubalwa esenzeke eNanda lapho kwadutshulwa kwabulawa abantu abawu-6, okunguMlondi Kunene (25), uQaphelani Mkhovu (20), uMpho Getene (22) uPhillip Hinsa (26), uWandile Fanaphi (17), noLindo Sphambo (22), nesenzeka esiGcekeni, eRichmond lapho kwadutshulwa abantu abawu-8 okunguSihle Mbambo (24), uNqobani Nzimande (23), uSiyabonga Nzimande (22), uPhilasande Mtolo (15), uMxolisi Mtolo, uSihle Mdunge, uMohammed Omar (41), noThandiwe Vezi (17), kanye nesenzeke eMthwalume lapho kwadutshulwa abantu abane
Esigamekweni sasesiGcekeni, uMnu Cele uveze ukuthi sekubo-shwe abasolwa abawu-7 abanemi-nyaka ephakathi kuka-21 no-43 ubudala. Uveze ukuthi abasolwa batholwe nezinhlokohlela zezibhamu nezidakamizwa. Esigamekweni saseNanda, amaphoyisa asebophe umsolwa oyedwa otholwe nesibhamu. “Lesi sifundazwe sibe nezigameko eziwu-229 zokubulawa kwabantu ngesikhathi esisodwa, kusukela ngoMbasa (April) (wonyaka odlule) kuya kumhla ka-23 kuMasingana (January) wanonyaka. Kulezi zigameko, bawu-531 abantu ababulewe,” kusho uMnu Cele. Uthe yize imbangela yolokhu kuhlaselana ingakaziwa, kodwa impi yezidakamizwa nokuziphindisela yikhona okuhamba phambili kulezi osekutholakale kuzona imbangela. Utshele abezindaba ukuthi yize iWestern Cape beyaziwa njenge-ndawo eyinkinga ngezigameko zokubulawa kwabantu ngesikhathi esisodwa, kodwa lokhu sekubonakala kwenzeka kakhulu KwaZulu-Natal.
Previous articleIminjunju ngentombazanyana eyebiwa eminyakeni ewu-31 edlule
Next articleKumnyama ngekusasa lomdlali weChiefs